Magangelyo-doonka Yukreyn ka imaanaya
Magangelyo-doonyada Ruushka ka imaanaya
Buug yar oo ay ku qoranyihiin macaluumaad la xiriira codsiga magangalyadaLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Magangalyo weydiisashada Finland Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Finland miyaad imaanaysaa adigoo Yukreyn ka imaanaya? Bogagga Hoggaanka socdaalka ayaad ka heleysaa tilmaanbixinnada codsashada sharciga degganaanshaha.
Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaMigri.fi
Macluumaad loogu talaggalay reer YukreynLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Magangelyo-doonyada reer YukreynLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Ammaanka bulsho ee FinlandLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Bogagga Hoggaanka socdaalka ayaad ka heleysaa macluumaad loogu tagallay dadka Ruushka ah oo ku saabsan shariciyada deganaanshaha, codsashada magangelyada iyo arrimaha jinsiyadda.
Macluumaad loogu talaggalay muwaadiniinta RuushkaLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Iskadhaafida baaritaanka codsiga magangalyo doonkaLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Cunugga Finland yimid mas'uul la'aanLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Ka baaraandegsita codsiga magangalyadaLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
xukun dil ah ama toogasho,
jirdil ama habdhaqan bani’aadminimada ka baxsan ama ciqaab, ama
MagangalyoLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Abiil ka qaadashada goaanka diidmada magangalyadaLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Dib u celinta qofka magangalyodoonka ahLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaOikeuslaitos
Xafiisyada kaalmada sharcigaLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Cawinaad xagga sharciga ah ee la siiyo qaxootigaLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Waxaa sameynta shaqada ugu baahantahay kaarka canshuurta. Ka codso Xafiiska canshuurta ee kuugu dhow kaddibna u gee shaqo-bixiyahaada. Ka akhri faahfaahin dheeraad ah bogga InfoFinland Kaadhka cashuurta .
Xuquuqda shaqada ee qofka magangalyo doonka ahLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Ogolaanshaha joogitaanka ee sababo kale lagu bixiyayLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa